खोपको सहज पहुँच कहिले ? | News Dainik
News desk १० माघ २०७७, शनिबार ०७:२७ समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
औषधि व्यवस्था विभागले भने निजी क्षेत्रतर्फबाट धेरैजसोले ठाडो निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको जनाएको छ । ‘हालसम्म जम्मा चारवटा निवेदन परेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने, ‘एउटै चिनियाँ भ्याक्सिन कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता म हुँ भन्दै दुइटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । कुनचाहिँ आधिकारिक विक्रेता हो भनेर पहिचान गर्दै छौं । त्यसका लागि थप कागजपत्र मागेका छौं । भारतका दुईवटा खोपका लागि भने आधिकारिकता विवाद देखिएको छैन ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट
अघिल्लॊ कुन प्रदेशको मौसम कस्तो ? हेर्नुस् तीन दिनको पूर्वानुमान
पछिल्लॊ कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय